Umgama wenkondlo wenkwenkwe yam ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Imibongo Yothando kude kwisithandwa sam
Uthando njengesibini lusekwe ekuthandeni nasekuxabiseni, ukuba niye wamthanda kwaye nimfuna ngokwenene, ngekhe nikwazi ukuyeka ukumthanda nokuba ukude kuni. Kuyinyani ukuba kude ngamanye amaxesha kunzima kumtshato wesibini, nangona kunjalo ukuba nobabini nifuna ukuqhubeka nobudlelwane kwaye aninantandabuzo malunga nendlela oziva ngayo malunga neqabane lakho, uthando luyakwazi ukuhlala.
Ukuba umthandi wakho ukude kwaye ufuna ukunikezela ibinzana elihle kuye, ukwindawo elungileyo, emva koko sishiya uluhlu lwamabinzana amnandi othando kumthandi wam okude. Isithandwa sakho siya kufuna ukubuya kwakamsinya emva kokuba unikezele amanye ala mabinzana kuye.
1 Umgama othandana nemibongo yesithandwa sam
2 Umgama othandana nemibongo yesithandwa sam
3 Iividiyo zemibongo yothando ekude yesithandwa sam
- "Ndikhe ndakhona kwiingcinga zam ngawo onke amaxesha okoko ndiziva nditsalelekile kuwe, ndiyakukhumbula kodwa uthando lwam kuwe alutshintshanga."
- "Ukuba isibini siziva uthando Ayinamsebenzi nokuba bakude kangakanani, ukuba bayathandana ngokwenene, okona kubalulekileyo kukuziva luthando olumanyanisayo, ndiyakuthanda kwaye nangona ungekho apha, ndicinga ngawe wonke umzuzu. "
- "Umgama osahlulayo uyakunceda ukungqina ukuba uthando lwethu lokwenene, ndiyakuthanda ngamandla am onke kwaye xa sikunye ndiziva ndonwabile, ndiyakuthanda kakhulu ubomi bam."
- "Iiveki ezininzi zidlulile ukushiya kwakho kwaye ndisakulindile kuba uthando lwethu aluyonto engekhoyo, yinyani, ndiyakuthanda ngomphefumlo wam wonke kwaye lonto ayizukutshintsha mntu."
- "Ushiye ukufezekisa iinjongo zakho kwaye ndiyaqonda ukuba yeyona nto ilungileyo kuwe, nangona kunjalo andiyeki ukuba nosizi ngokungabikho kwakho, kwezi nyanga zindincedile ukuba ndiqonde ukuba ndiyakuthanda kuphela kwaye ndiyakuthanda, nguwe Uthando lobomi bam kwaye icala lakho kuphela ndiziva ndigqibelele. "
- "Mna nawe besisazi ukuba ayizukuba lula ukuqhubeka nokuthandana kwethu, kodwa ndiyakuthanda kwaye andizimiselanga kuphelisa ubudlelwane bethu ngoba nangona sikude omnye komnye ndiyaqhubeka ndikuthanda, xa ubuya uzokuqonda ukuba ndiyakuthanda kuphela."
- "Ndiyalikhumbula eloxesha xa ndandihamba ecaleni kwakho wandiphuza, ngoku ubukhona ndiyaqonda ukuba ndikuthanda kakhulu, bacinga ngawe mzuzu ngamnye, xa sikunye ndiyakuthembisa ukuba asisokuze siphinde sihambe."
- "Ndikwisixeko esihle, kodwa ndiza kuyishiya ndibuyele kwicala lakho ndiphinde ndibenawe, uyindoda elungileyo kwaye nangona ungekho ecaleni kwakho ngalo mathuba uthando lwam kuwe lukhula yonke imihla."
- "Ndingathanda ukuba konke oku kube liphupha nje elibi, ndiziva ngathi andinakuphinda ndiyithathe, ukwahlulwa kuwe kundenza buhlungu kwaye intliziyo yam ibe buhlungu, nangona kunjalo kuye kwalukhulisa uthando lwam kuwe."
Sithandwa, ndiyathemba ukuba uhambo lwakho luphela kwangoko kunokuba bekucwangcisiwe. Andiziboni iiyure ozibuyileyo kwaye sizichithe kunye njengesiqhelo. Andikhathali nokuba awundithabathe uhambo, okokoko ndinawe, bendinokuzivalela iiyure ezingama-24 ngosuku kwaye andizudinwa kukubakho ecaleni kwakho. Besisoloko sonwabile kwaye ngoku ndiyakukhumbula ndiyavuya ukucinga ngako konke esiza kukwenza kunye xa ubuya. "
“Kuba bekufuneka uthathe olo hambo lomsebenzi, intliziyo yam ifana newotshi esoloko ikhathaza ixesha lokwazi ukuba izakuthatha ixesha elingakanani ngaphambi kokuba ubuye. Ndikukhumbule kakhulu ebomini bam kwaye amaxesha amaninzi ndifuna ukuba ubuye kwi-incognito kwaye undinike isimanga esihle sokuba ukulinda kwam kugqityiwe kwaye ekugqibeleni ubuyile. Ndiyakuthanda kwaye ndihlala ndinethemba lokuba uza kubuya ngokukhawuleza. »
«Ukusukela oko ndafumanisa ukuba uzise umhla wokubuya kwakho, ndiziva ndonwabe kakhulu kuba ndingasayazi indlela yokubonisa olu vuyo lokwazi ukuba uyakuba nam kwakhona. Okomzuzwana bendicinga ukuba ngekhe ubuye umva okanye ukuba uchitha ixesha elininzi ungathandana nomnye umntu. Ndiyabulela kuThixo ngokuba zizimvo nje ezingenamsebenzi zokuphelelwa lithemba kwam ukuba bangabinam kwaye ngoku kufuneka ndibalale phantsi ukuze ndibuyise uthando lwam. »
«Xa ndisiya kwakwezi ndawo sasidla ngokuya kuzo xa ubukunye nam, ndisiba nostalgic, ndiqala ukukhumbula zonke iinkcukacha, wonke umzuzu esihlala kunye kwaye inye kuphela into endiya kuthanda kukuba ubuye kwicala lam kwaye ungaze wohlukane ngakumbi ngoba le ntlungu yokwazi ukuba ukude iyanditya kwaye andinakuphila ndisazi ukuba ukude nosapho lwakho nothando lwam ».
«Ndifuna ukumamela iingoma zothando ezenza ukuba ndicinge ngawe, ndifuna ukucwangcisa izinto ezininzi endinokufuna ukuzenza nawe, ndifuna ukukubuyekeza ngee-caress zam kunye nothando lwam lonke ixesha ebesingayi kuba kunye. Ndingathanda ukuba undithembise ukuba awusokuze uphinde undishiye ndedwa kwaye ukuba kuya kufuneka uphinde uhambe kwakhona uya kundithatha.
"Iintsuku zesaqhwithi sokulinda sele zizakuphela kwaye ndifuna wonke umntu azi ukuba uzokuza kungekudala kwaye nangona umgama siye sakwazi ukugcina iimvakalelo zethu kwaye siziva sithandana ngakumbi."
Iividiyo zemibongo yothando ekude yesithandwa sam